Nuxurka Doodii Labaad Ee Donald Trump Iyo Hilary Clinton | Berberatoday.com
Nuxurka Doodii Labaad Ee Donald Trump Iyo Hilary Clinton
Hargeysa(Berberatoday.com)-Doodan u dhexaysa musharrixiinta ku tartamaya madaxtinimada dalka Mareykanka, Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa si toos ah TV-yada caalamka looga daawadanayay habeenkii Xalley.
Trump ayaa la weydiiyay muuqaal laga duubay oo ku saabsanaa isagoo ku gefaya dumarkaWaxa uu sheegay in aanu arrintaasi ku faraxsaneyn, islamarkaana uu aad uga xun yahay falkaasi. Laakiin wuxuu isku difaacay in hadalkaasi uu ahaa wada sheekeysi gaar ah.
Waxa uu ku adkeystay inuu dumarka xushmeynayo. Seyga Hillary Clinton ayuu ku eedeeyay inuu isaga oo ah Trump uu kala xun yahay. Hillary Clinton waxa ay sheegtay in muuqaalkaasi uu muujinayo in Donald Trump aanu u qalmin inuu madaxweyne noqdo.
Waxay ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin, Muslimiinta Mareykanka, Dadka Madow, xaaladaha dalalka colaadaha ay ka jiraan sida Suuriya, iyo arrimaha caafimaadka ee Mareykanka.
Intii lagu guda jiray dooddii labaad ee madaxweyne oo ay la yeelatay Donald Trump, ayaa Hillary Clinton waxa ay sheegtay in marnaba ciidamo dhulka ka dagaalama aanay u diri doonin dalka Syria, taasi oo ay sheegtay inay tahay xeelad aan wanaagsaneyn.
Waxa ay xaaladda magaalada Aleppo ku sheegtay mid musiibo ah, islamarkaana Ruushku go’aan ku gaadheen inay burburiso, si ay xukunka ugu sii hayso Bashar Al-Assad.
Trump ayaa waxa uu sheegay in ninka uu u doortay inuu madaxweyne ku xigeen u noqdo ee Mike Pence ku raacsaneyn in la duqeeyo bartilmaameedyada dawladda Syria.
Clinton ayaa sheegtay in musharaxiintii hore ee Jamhuuriga laga yaabay inaanay ku raacsaneyn siyaasadooda, in markan ay tahay markii ugu horreysay ee ay su’aal ka keento ku haboonaanshaha musharax ee ah inuu dalka hogaamiyo, waxayna sheegtay in Trump aanu lahayn degenaan uu dalka ku maamulo.